Cake mofomamy 2 akora - Resipeo Thermomix | ThermoRecipes
Mofomamy majika 2
Gaga anao ity mofomamy misy fampiasa majika 2 ity. Tsy ho nosaintsainiko mihitsy izany tsy misy afa-tsy yaourt sy ronono mifangaro afaka mahazo recette tsotra ianao.
Tsotra dia tsotra ny fomba fahandro azy mahafinaritra ny manomboka amin'ny Thermomix®. Ary, mazava ho azy, aza misalasala manao izany mba hahandro amin`ny ankizy. Haingam-pandeha izy io ary azon'izy ireo atao ny manomana azy samirery, na dia tsy maintsy ho eo amin'ny faran'ny fandrahoana sakafo aza ianao mba hisorohana ny fandoroana setroka.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba an'ity mofomamy misy fampiasa majika 2 ity ianao dia tohizo ny famakiana fa hazavainay ny tetika tsara indrindra hahatonga azy io ho tonga lafatra ho anao.
1 Mofomamy majika 2
2 Te-hahafantatra bebe kokoa momba an'ity mofomamy misy akora 2 ity ve ianao?
Mofomamy haingana toy ny tsotra hankafizana amin'ny fotoana rehetra.
250 g ny yaorta voajanahary amin'ny hafanan'ny efitrano (yaourt 2)
Tondra-dronono mihombo 340 g amin'ny hafanan'ny efitrano
Ataontsika ao anaty vera ny yaourt sy ny ronono ary afangaroy 15 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Araraka ao anaty fitoeran-vera 12 sm x 12cm ny fangaro. Apetrantsika eo aminy ny sarony, nefa tsy manidy azy tanteraka.
Apetrakay ao anaty varoma izy io ka hikatona mba hahazoana antoka fa mafy ny sarony.
-Raha tsy mahandro na inona na inona ao anaty vera isika:
Nametraka rano 500 g izahay ary manafana azy mandritra ny 25 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Amin'ny fiafaran'ny fotoana dia manamarina isika fa napetraka tsara ny mofomamy ary esory.
-Raha ao anaty vera raha mahandro isika:
Apetrakay amin'ny toerany ny varoma ary fandaharana 25 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Rehefa mangatsiaka ny mofomamy dia mihazakazaka spatula manodidina ny sisiny izahay mba hanampiana azy ireo hanala azy.
Esory amin'ny lovia, haingo amin'ny solila, voankazo vaovao ary aroso miaraka amin'ny a coulis frezy namboarina.
Te-hahafantatra bebe kokoa momba an'ity mofomamy misy akora 2 ity ve ianao?
Tsotra tokoa ity fomba fahandro ity ka tsy manana tsiambaratelo firy nefa misy roa fitaka izany dia hanisy fahasamihafana amin'ny valiny.
Ny zavatra tsy maintsy tadidinao voalohany dia ny tokony ho fangaroany hafanan'ny efitrano.
Raha nanadino ny nitondra azy ireo avy tao anaty vata fampangatsiahana ianao ary te-hanao an'ity fomba fahandro ity izao dia mamporisika anao aho amin'ny dingana handaharanao fandaharana 1 minitra, 40º, hafainganana 5. Amin'ity fomba ity dia hahafahanao "manafana" azy ireo kely ary hifangaro kokoa izy ireo.
Ny zava-dehibe faharoa dia izay bobongolo izay ampiasainao dia manana sarony manokana apetraka mandritra ny fandrahoan-tsakafo. Aza hadino fa ny mametraka azy eo amboniny ihany no mila ataonao, tsy mila manidy azy tanteraka ianao.
Ny soso-kevitra fahatelo dia ny fampiasanao lasitra mitovy amin'ilay ao amin'ny recipe. Ny ahy dia efajoro, an'i Cristal, 12 sm x 12 sm. Na dia azonao atao ny mampiasa 10cm x 14 cm mahitsizoro saingy tsy lehibe kokoa noho izany mba hanana volavola kely ny mofomamy.
Na ahoana na ahoana, alohan'ny hanombohanao amin'ny resipeo dia alao antoka fa mifanaraka tsara izany ny varoma. Ka tsy mila manatsara fotoana sy mandany fotoana ianao.
Araraoty ny fotoana hanaovana an'io fomba fahandro io rehefa mahandro fanosotra, ron-kena na fomba fahandro efa ela ianao. Azonao atao izany mahandro amin'ny ambaratonga ary mitsitsy fotoana sy hery.
Ny voankazo mena dia tsara ho fanampin-tsakafo satria manome azy ireo naoty asidra izay mifanohitra tsara amin'ny tsiro mamy. Azonao atao ny manompo azy ireo vaovao na ao anaty coulis.
Tena caloric ny mofomamy ka manoro hevitra aho fanjifana tsindraindray. Aza adino koa fa ho an'ny olona 6 ity mofomamy ity. Aza mihoa-pefy raha tianao ny handanjalanja ny sakafonao.
Aza misalasala manao an'ity kinova ity Tsy misy lactose. Eny an-tsena dia afaka mahita na yaourt sy ronono condensée mety ho an'ny tsy mahazaka laktose ianao ary manome toky anao aho fa mitovy tanteraka ny vokatra.
Ianao dia afaka tazomy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 5 andro farafahakeliny. Na dia tsy heveriko fa haharitra ela izany.
Fanazavana fanampiny - Fomba fahandro fototra: coulis raspberry
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Resaka varoma, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Fivarotana mofomamy » Mofomamy majika 2
Manana lasitra boribory mangarahara tsy misy sarony aho. Afaka asiana film cling ve aho?
Tsy afaka manome toky anao aho fa mandaitra izany fa afaka manandrana ianao. Na izany na tsy izany, aza manakatona azy tsara satria tsy maintsy apetraka eo ambony ny sarony fa tsy mihidy.
azo atao amin'ny lait coco??
ho an'ny diabetika
Tsy nanandrana nanao azy tamin'ny ronono voanio aho fa raha manandrana ianao dia lazao anay ny fandehany. 😉
Kitapo misy tsipelina miaraka amin'ny mananasy sy ham